Nezvedu - Daxin Machinery Co., Ltd.
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd.inyanzvi bhizinesi rinogadzira zvemuchadenga basa michina. Iyo kambani iri kunyanya kuita dhizaini, kuvandudza, kugadzira uye kutengesa kwemuchadenga basa michina. Daxin Machinery inotora mutoro wekupa mhando yepamusoro, yakachipa-yepamusoro-yekukwirisa michina kune vazhinji vashandisi, inogara ichivandudza zvigadzirwa zviripo, uye inogara ichitangisa nhevedzano yezvigadzirwa kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vakasiyana. Zvigadzirwa zvaro zvine hunhu hwemidziyo inoverengeka, kusimudza kwakatsiga uye kushanda kwakachengeteka. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mukukwirira-kwakakwirira kuongorora, kumisikidza uye kugadzirisa emabhizimusi uye emigodhi emakambani, njanji, migwagwa, nhandare, zvikepe, simba remagetsi nemamwe maindasitiri; kubata zvinhu, kutakura, uye kurongedza mumatura, madoko, uye mitsara yekugadzira; nhandare, makamuri emisangano uye zvimwe zvivakwa zvepamusoro-zvisingazivikanwe zviitiko, kushongedzwa, kugadzirisa uye kuchenesa basa, nezvimwe, zvinogona kuvandudza zvakanyanya basa rayo.
Iyo kambani ine yakakura-yekucheka kucheka, kukotama, kutenderera, kupopera uye zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi, pamwe nechikwata chehunyanzvi mainjiniya mainjiniya uye nyanzvi mushure-yekutengesa sevhisi yevashandi. Iyo kambani ine kurira kurongeka, yakasimba hunyanzvi uye inoshanda kugona kwevashandi, inoshanda yekugadzira sangano, uye yakavimbika logistical rutsigiro. Inobatanidza kugadzirwa, kutengesa uye kubhadharisa masevhisi ekupa vatengi vakasiyana nemidziyo yakakodzera uye masevhisi.
Qingdao Daxin Machinery inoomerera kune bhizinesi uzivi hwe "vanhu-vanotungamira, kushanda kwakamisikidzwa, kupayona uye hunyanzvi, uye kugona kuuraya", inoteedzera mweya webhizinesi we "hunyanzvi, kutsvaga chokwadi, kutendeseka, uye kugona", inoshingairira kuita basa reboka uye zano renyika dzebhizinesi, uye inoshandira zvemuchadenga michina Iyo yekuvandudza tekinoroji yekambani yakawana zvibereko zvine zvibereko. Kuvimba nehunyanzvi hwetekinoroji, hunyanzvi hwekuvandudza zvinhu uye bhenefiti zvakanakira, hunyanzvi hwese hwekuvandudza hunyanzvi uye hunyanzvi hwekuita hwakasimudzira nekukurumidza, nechinangwa chekuva wekutanga-kirasi uye mukurumbira wepasirese mugadziri wezvigadzirwa zvemuchadenga.
Main Chigadzirwa: scissor lift, car lift, cargo lift, aluminium aerial work platform, wheelchair lift, boom lift, high altitude aerial work truck, orderpicker, stacker, dock ramp nezvimwe.